Zoma II Karemy – Trinitera Malagasy
Zoma II Karemy
Jenezy 37, 3-28/
Md Matio 21, 33-46
Indry eny ny mpanonofy, andeha hovonintsika izy. Ny mety ho fiangarana na tombom-pitia dia mampirongatra ny fialonana sy ny fankahalana, izay miantomboka amin’ny tsy fahaizana miteny am-pitiavana ary mety hihafara amin’ny fitadiavana izay handringanana mihitsy aza. Mety hisy tonga saina ihany anefa ao, ka sahala amin’i Robena, hitady hiaro ny aina, na dia tsy sahy hijoro ho fahavalom-bahoaka aza.
Lazain’ny Vakiteny fa ny hanafaka azy no tanjon’i Robena saingy namidin’ny rahalahiny tamin’ny Ismaelita (Andriamanitra nihaino) sendra nandalo i Josefa, araka ny torohevitr’i Jodà: avadika sôsy. Dia izay no nahatonga azy ho any Ejipta. Ary fantantsika ny tohin’ny tantara. Rehefa tonga mpitantana ny haren’i Ejipta i Josefa ka tonga nandadilady hangataka tohan’aina taminy ireto rahalahiny ireto, ataony ahoana?
Nisy tompona tanim-boaloboka hoy i Jesoa, namefy manodidina sady nandavaka tany hanaovana famihazana. Kanefa isaky ny taom-pahavokarana, rehefa mandefa ny ankizilahiny handray ny vokatry ny tanim-boalobony ilay tompony, dia vono sy tora-bato no nasetrin’ny mpiasa ireo iraka. Nafefany tany hatramin’ny zanany, kanjo famonoana no nokasainy mba hahazoany ny lova. Dia novonoiny tany ivelan’ny tanimboaloboka ilay zanaka lahitokana.
Dia hamaly faty ve Andriamanitra? Josefa aza tsy namaly faty fa nandray ireo rahalahiny satria nolazainy fa fandaharan’Andriamanitra mba hamonjy ny tany rehetra no nanekeny ny rahalahiny hahavanona loza hivarotra azy. Ny vato narian’ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro (clef de voûte), izany no zava-mahagaga ataon’Izy Tompo. Avy amin’ny fahadalan’olombelona dia afaka manao zava-mahagaga Andriamanitra. Tsy handrigana ny mpiasa tsy valahara no hiasany loha fa ny hampamokatra ny Fanjakany. Tsy mamaly faty Andriamanitra fa mitady fomba hahafahany manavotra ny zanany rehetra. Ny zanany no nirahiny mba hizaka ny vokatry ny fahotana hifamonoan’ny mpirahalahy. Ambaran’i Jesoa mazava kosa anefa fa raha tsy mahay manararaotra ny fahasoavana omen’Andriamanitra isika, dia isika ihany no hamery ny tenantsika, satria homeny firenena hafa hampamokatra azy ny tanim-boalobony.
Araka ny lazain’ny salamo 104 fa na ny fivarotana an’i Josefa ho toy ny andevo aza nanjary fanavotana ho an’ny rahalahiny sy ny vahoaka rehetra. Tokony hoventesina mandrakariva ny hatsaram-pon’Andriamanitra asehony amin’ny ataony rehetra. Ary raha haintsika ny miaina am-pitiavana ny zavatra tsy an-drariny mety hahazo antsika dia hain’Andriamanitra kosa ny mampiasa izany ho tonga fitaovana hanitarany ny fanjakany. I Josefa tonga fanavotana ho an’ny tany tontolo, satria voafidy ho mpanapaka ny fananana rehetran’ny Mpanjaka. I Jesoa koa, namidy ary novonoina no tonga Tompo sy Kristy, santatry ny fiainana tsy manam-pahataperana ho antsika.
Hahay hampamokatra ny fahasoavana ankinin’Andriamanitra amintsika anie isika. Mandefa ny mpanompony izy hitaky izany vokatra izany, ka tsy sanatria hihidy fo velona tahaka ilay mpanan-karena omaly isika, ka handavaka hantsana hanelanelana azy sy Lazara. Tsy ho sanatria kapoka sy tora-bato no havalintsika izay mangataka fiantrana amintsika. Irak’Andriamanitra izy ireny mba hizarantsika ny fahasoavana. Hampitombo ny fitiavantsika ny mahantra (Lazara, vonjen’Andriamanitra) sy ny fahantrana anie ny Karemy, mba hampifikitra ny fiainantsika amin’ny mandrakizay.
Sabotsy II Karemy
Alakamisy II Karemy
Alakamisy faha-13 mandavantaona
Alarobia faha-13 mandavantaona
Alatsinainy faha-13 mandavantaona
ALAHADY FAHA-13 MANDAVAN-TAONA Taona D
24 jona – Nahaterahan’i Joany Batista
25 mars 28 janvier agnès Alahady annonciation Aperuit illis Batemy Bon Remède coronavirus Eokaristia ezekiela famindram-po Fianakaviana Fiaviana herinandro masina Immaculée innocents jeremia Jesoa Joany Joany 6 karemy Kristy Mpanjaka lavenona lazara Lioka Mahantra Marka Martiry Masina Maria matio Md Josefa Noely paka Papa François Rainay sampankazo senza messa Taona A Taona B Taona D tempoly tomany Toriteny tsodrano
Archives Sélectionner un mois juin 2022 (18) mai 2022 (29) avril 2022 (29) mars 2022 (20) février 2022 (2) décembre 2021 (2) novembre 2021 (3) octobre 2021 (10) octobre 2020 (2) septembre 2020 (2) août 2020 (1) mai 2020 (1) avril 2020 (4) mars 2020 (36) février 2020 (28) janvier 2020 (31) décembre 2019 (38) septembre 2019 (1) août 2019 (13)
Alakamisy faha-13 mandavantaona 29 juin 2022